इजरायल रोजगारमा जान के-के चाहिन्छ योग्यता ? कहाँ दिने आवेदन ? (भिडियो सहित) « Bagmati Online
बिभागमा महानिर्देशक दहालका अनुसार इजरायल रोजगारीमा नेपाल सरकारको संलग्नतामा श्रमिक पठाइनेछ । यसमा कुनै पनि नीजि क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छैन । यसअगाडी ईजरायलमा नेपालीलाई रोजगारीका लागि केयरगिभर लगायतमा खुल्ला भएपनि नीजि क्षेत्रबाट श्रमिक पठाउँदा चर्को रकम असुलिएका कारण ईजरायलले नेपाली श्रमिक लिन रोकेको थियो । यस सम्बन्धमा पुरा जानकारी भिडियोमा तल हेर्नुहोस् ।